Idol တွေရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အေဂျင်စီတွေ ဘယ်လိုကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသလဲ? | Asia News Bar
Idol တွေရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အေဂျင်စီတွေ ဘယ်လိုကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသလဲ?
Agency တွေအနေနဲ့တော့ ကိုယ်ပွဲထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ idol တွေ နာမည်ကျော်ပြီး ပရိတ်သတ်အားပေးလာတာနဲ့အမျှ အကျိုးအမြတ်လဲများသလို တာဝန်တွေလဲ ပိုကြီးလာပါတယ်။
Idol အများစုကို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ရာမှာလဲ အုပ်ချုပ်သူတွေအတွက် ခေါင်းအစားဆုံးကတော့ အချစ်ရေးကိစ္စပါပဲ။ Idol တွေရဲ့ ချစ်မှုရေးရာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေကို ထိပ်တန်းအေဂျင်စီတွေ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သလဲဆိုတာကိုတော့ koreaboo သတင်းဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
နာမည်ကျော်အဖွဲ့များစွာကို မွေးထုတ်ထားတဲ့ YG ရဲ့ နည်းလမ်းကတော့ idol ဖြစ်ဖို့ လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလနဲ့ တက်သစ်စအချိန်မှာ dating ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်ပါတယ်တဲ့။
BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တွေရော iKON ရဲ့ Bobby ရောက သူတို့မှာ ရည်းစားထားခွင့်မရှိကြောင်း ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေမှာ ပြောထားဖူးပါတယ်။ B.I ကတော့ ရည်းစားထားခွင့်မထားခွင့်ဟာ အေဂျင်စီအတွက် ဘယ်လောက်ရှာပေးနိုင်သလဲဆိုတာ မူတည်ပြီး ပိုက်ဆံများများရှာနိုင်ရင် date ခွင့်ရပါပြီတဲ့။
ဒါပေမယ့် ဒီကန့်သတ်ချက်ဟာ အားလုံးအပေါ်အကြုံးမဝင်ပါဘူး။ AKMU ရဲ့ Chanhyuk ကတော့ သူဟာပွဲဦးထွက်ကတည်းက dating နဲ့ပတ်သတ်လို့ ပိတ်ပင်ခြင်းမခံခဲ့ရပါဘူးတဲ့။ သီချင်းရေးသားတဲ့လူမို့ date ချင်ရင် date လို့ရတယ်လို့ YG ကခွင့်ပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Idol တွေနဲ့ CEO ကြားမှာ ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ JYP လဲ dating နဲ့ပတ်သတ်ရင်တော့ စည်းကမ်းတင်းကြပ်ရပါတယ်။
အစကတော့ idol တွေကို ပွဲဦးထွက်ပြီး ငါးနှစ်အကြာအထိ ရည်းစားမထားရဘူးလို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သုံးနှစ်အထိ လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ​တော့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လွတ်လပ်သွားပါပြီတဲ့။ JYP ကလဲ YG လိုပဲ အချို့အနုပညာရှင်တွေအပေါ် dating ban ကို ဖြေလျော့ပေးတာတွေရှိပါတယ်။ အဆိုတော် Baek A Yeon ကိုဆိုရင် သီချင်းဆိုတဲ့အခါ ခံစားသက်ဝင်မှုကောင်းအောင် ရည်းစားထားဖို့တောင် အားပေးခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။
ခေတ်အဆက်ဆက် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအဖွဲ့တွေကို မြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ SM ကတော့ စည်းကမ်းအကြီးဆုံးလို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ တော်တော်လေး ဖြေလျော့ပေးပြီး အတိအကျ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားတာ မရှိပါဘူးတဲ့။
Radio Star အစီအစဉ်မှာတော့ SM Entertainment ရဲ့ မင်းသမီး Lee Yeon Hee ဟာ အေဂျင်စီအနေနဲ့ ရည်းစားထားတာကို ရေးကြီးခွင်ကျယ်မလုပ်ပေမယ့် ရည်းစားထားတာ လူမိသွားရင်တော့ ပြဿနာတက်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Next လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှုသင့်တဲ့ မမနဲ့မောင်လေးဇာတ်လမ်းတွဲများ (Part-1) »
Previous « It's Okay To Not Be Okay ထဲကမင်းသား Oh Jung Se ပါဝင်သော ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲများ
ပရိတ်သတ်တွေကိုအာရုံဖမ်းစားထားနိုင်တဲ့ Mao Xiaotong နဲ့ Yang Le တို့ရဲ့ စုံတွဲဓာတ်ပုံများ
Saint Laurent က ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာရဲ့ အိမ်ကို သွား​ရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé
Follower အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသားအနုပညာရှင် ၁၅ ဦး
နာမည်ကြီးလာဖို့ လောဘကြီး‌နေတယ်လို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ Naeun နဲ့ Gunhoo တို့မေမေ
Jennie ရဲ့ Celebrity friends တွေက ဘယ်သူတွေ ဖြစ်မလည်း…?